Global Voices teny Malagasy » Fahalalaham-pitenenana sy fankalazana mozika ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Maraokana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Oktobra 2018 5:35 GMT 1	 · Mpanoratra Farah Kinani Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Maraoka, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fiteny, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Hehy, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mozika, Politika, Vaovao Mafana, Zavakanto & Kolontsaina
Hatomboko amin'ny Farid sy ny antontanisany mahaliana  momba ny famahanam-blaogy any Maraoka. Avy eo i Reda izay nahita, noho i Shimon Peres , fa misy fifandraisana misy eo amin'ny hakamoana sy ny finoana silamo 
Amine, mpankafy an'i Tom sy Jerry , tahaka ny ankamaroantsika, nandefa lahatsoratra momba ilay mpamokatra sariitatra malaza, Joseph Barbera   izay maty tamin'ny alatsinainy teo amin'ny faha-95 taonany.
Iharan'ny fanafihana i Nichane . Ny antony? Lahatsoratra fandrakofana navoakan'ny gazetiboky mpanesoeso momba ireo sangisangy malaza indrindra any Maraoka. Eny, hita fa tia mihomehy momba ny Fahefana, ny Firaisana ara-nofo, ary ny Finoana ny Maraokana. Tsy misy mahalaza manokana an'i Maraoka satria ireo vazivazy indrindra no miresaka momba izao tontolo izao. Ny vazivazy sasany dia momba an'Andriamanitra sy ireo mpaminany , ary ho an'ireo mpitsidika an'i Khorafa,  izay mbola ratsy kokoa noho ny sariitatra Danoà .
Maraokana mpanao gazety sady bilaogera Mohamed lachyeb  mangataka amin'ireo mpitsidika azy mba hanameloka  an'i Nichane.
Tezitra amin'i Nichane  ihany koa i Koety, ary mety hiala tsiny amin'ireo mpamaky azy amin'ny herinandro ho avy i Driss Ksikes, talen'ny famoahana lehiben'i Nichane.
Misy ny fitoriana ho apetraka amin'ny gazetiboky, ary ho an'i M.S.Hjiouj, mampihomehy avokoa  izany rehetra izany.
Laila Lalami nandefa momba ny dadabe noely Miozolomana  monina ao Casablanca! Ary tsy izany ihany no zavatra mahagaga azy.
Nanolotra fananganana moske ao amin'ny renivohitra Shinoa  i Maraoka, manoratra  i Samir, iray amin'ireo mpanoratra ao amin'ny View from Fez .
Mahatsiaro mizara ny eritreritrao amin'ny filoha tena “malaza” ve ianao? Eny, manana adiresy antserasera marina ho anao  ny eatbees. Laharana faha-204 manerantany ny bilaogin'ny filoha Iraniana, ary toa hita fa namaky ny hafatra tsirairay manokana i Ahmadinejad .
Attareq kosa mibilaogy indrindra momba ny fiainany andavanandro, ary nosoratana tamin'ny fomba tsotra saingy manintona izany. Mampalahelo sy manohina ny lahatsorany momba ny fahafatesan'ny zanany tao am-bohoka  ary ny farany dia momba ny loza hitan'i Attareq tamin'ny maraina  izay mahagaga!
Ao Maraoka noho ny fitsidihana vetivety i Adil R. izay mibilaogy matetika avy any Washington D.C . Gaga izy nahita maso “fitondrantena” vaovao tao amin'ny cybercafe ao amin'ny faritra misy azy.
Abdellatif Mossadeq mankalaza  ny taona voalohany namahanany bilaogy, miarahaba.
Label ash manome voninahitra  an'i Ibrahim Ferrer  ary le mythe mankalaza ny Al Aloua , karazana mozika folk Maraokana .
Tafaverina i Anima ary faly! Nahazo mailaka  manome toky fitiavana sy firehetam-po azy izy ary … fampakaram-bady!
Blafrancya koa faly mibilaogy momba an'i Sherbel Rouhana,  mpihira iray izay tsy mahatakatra hoe nahoana ny Libaney sasany no misisika amin'ny fampiasana ny teny Frantsay na Anglisy fa tsy Arabo. Arahabaina i Libanona, manana ny Blafrancya anao ianao;)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/10/127473/
 antontanisany mahaliana: http://maroc-blogs.blogspot.com/2006/12/quelques-chiffres-sur-la-blogoma.html
 hakamoana sy ny finoana silamo: http://hamadiblog.blogspot.com/2006/12/islam-bashing.html
 Tom sy Jerry: http://www.youtube.com/watch?v=5VMnrZc7UO0
 mpamokatra sariitatra malaza, : http://www.oulahcen.com/2006/12/20/tom-jerry-le-dessinateur-nous-a-quitte/
 momba an'Andriamanitra sy ireo mpaminany: http://www.nichane.ma/sommaire//1377.html
 ratsy kokoa noho ny sariitatra Danoà: http://hewar.khorafa.org/?p=16
 mba hanameloka: http://lachyab.jeeran.com/archive/2006/12/131939.html
 Tezitra amin'i Nichane: http://lachyab.jeeran.com/archive/2006/12/132423.html
 mampihomehy avokoa: http://www.mshjiouij.com/blog/archives/69
 nandefa momba ny dadabe noely Miozolomana: http://www.lailalalami.com/blog/archives/004557.html#004557
 renivohitra Shinoa: http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing
 manana adiresy antserasera marina ho anao: http://www.eatbees.com/blog/2006/12/19/ahmadinejad-blog/
 Laharana faha-204 manerantany : http://www.technorati.com/blogs/http://www.ahmadinejad.ir/
 fahafatesan'ny zanany tao am-bohoka: http://attaarik.maktoobblog.com/?post=94310
 hitan'i Attareq tamin'ny maraina: http://attaarik.maktoobblog.com/?post=154199
 mibilaogy matetika avy any Washington D.C: http://adilski.blogspot.com/2006/12/visiting-morocco-sooncount-down.html
 Gaga izy nahita maso “fitondrantena” vaovao : http://adilski.blogspot.com/2006/12/greetings-from-casa-ii.html
 manome voninahitra: http://labelash.blogspot.com/2006/12/ibrahim-ferrer-tribute.html
 mankalaza ny Al Aloua: http://lemythe.com/blog/index.php?2006/12/19/84-al-aloua
 karazana mozika folk Maraokana: http://www.youtube.com/watch?v=nSWLRiu6DWk
 Nahazo mailaka: http://anima.canalblog.com/archives/2006/12/19/3468318.html#trackbacks
 mibilaogy momba an'i Sherbel Rouhana,: http://blafrancia.maktoobblog.com/?post=164987